Melika 30-yalolucwaningo - a impikiswano, ome njengeqanda futhi obizayo. Isikhathi ushintsho, futhi okunethezeka iholide. Kwakungenxa Melika zangenkathi eziyinkimbinkimbi futhi iphikisana umsuka eziningana isitayela edume zokugqoka yokuphila. Enye yalezi izitayela awufi Chicago imfashini. Kwaba Chicago, emzini ezigebengu nokuthengisa ngemizimba, enamathiselwe kakhulu umfanekiso waso + futhi ukubukeka. Nezingubo Chicago isitayela kuyabiza, izinto ecwebezelayo, izesekeli zikanokusho futhi uboya.
Izici American-isitayela Chicago
Izingubo, ehambisana ku nokuchema ngezansi kwedolo nje noma phansi nge umqhewu kuze kwamadolo, mncane jumpsuit amasokisi amade, amagilavu eside, umphetho, izimpaphe, lace, amaparele, izimonyo - ezambiwa obukhulu kanye lipstick red. Abesifazane baye bazama ngangokunokwenzeka ithuba lokuveza imibono yazo, bonisa elikhangayo yabo nezocansi emansipation. Kumelwe-babe-accessory Laliwumhlobiso ekhanda ngesimo noma izimpaphe kudabuke ozungeza ebunzini nge imbali futhi afe, ngoba owesifazane ababhemayo babe vogue.
Owesifazane wokuqala, ababevivinya zonke izimiso samaPuritan futhi mores ukuthi waba ngukumkani Melika isikhathi eside egqoke isudi komuntu futhi izinwele aphuce, kwaba engenakuqhathaniswa Marlene Dietrich, wabophula kusukela ibhulukwe amadoda futhi tie. osaziwayo Abaningi namuhla namanje uthanda lokhu "bubuhle" isithombe, uya emcimbini.
Izingubo zamadoda Chicago isitayela, kodwa futhi njengoba abesifazane, ehlatshwe umxhwele ubuhle bayo, cut lihle nesitayela. Young American "gangsta dudes" ayethanda ukugqoka isigqoko, izibuko, uthayi khulula cut isudi, Vest, suspenders, zikhalele eside noma ijazi. Abaningi ibhantshi noma ingubo yakhe yokucasha holster noma into namandla kakhulu.
American isitayela ingubo idonse njalo, futhi Nokho, bakhangwa, okubangelwa isiphepho impikiswano. Namuhla imfashini kakhulu ukuhlela indaba ephathwayo amaqembu kanye kufakwe iqoqo Umklamo style Retro. Ethandwa kakhulu kuba Melika, kusukela 30-bit ne-ziphethe 60 mi. "Stilyazhi" amaqembu - elikhanyayo, ezimibalabala, yokusangana, inkanuko, ezihambayo ngokudansa ababegqoka izingubo ejwayelekile futhi nge glint abanonya emehlweni akhe. Chicago isitayela akuyona kunabayeni ukuthandwa futhi beba ethanda kakhulu ukuzizwa njengoba ezigebengu kanye abesifazane simpering nge mouthpieces, uboya noma izimpaphe. Nezingubo isitayela Chicago shades ikakhulukazi ugodo: abamnyama, abamhlophe, igolide, isiliva, burgundy.
Indlela ukukhetha isitayela ingubo iphathi?
Uma nabangani bakho wanquma have some fun futhi wenze ingqikithi party, zizwe ukhululekile ukukhetha isitayela Chicago. Okokuqala - kungcono ngobuhlanya fun, ezithakazelisayo futhi engavamile. Okwesibili, kuyoba usizo kulabo abanentshisekelo imvunulo zomlando ukuthandwa style Retro.
Nezingubo e isitayela Chicago kwabesifazane ilula kakhulu futhi ehambisana kulungile. ingubo Mahhala nge okhalweni ongaphakeme inzuzo ukugcizelela noma zibukeke ukwenza kwamathanga akho slimmer. Kungaba ukuzenzela okwakho kusuka ukukhanya Indwangu ayevumela noma yendwangu nge lurex.
Thola zonke izimfanelo esingokwemvelo yesithombe. izikhwama ezincane kanye amagilavu eside ngempumelelo sikhulise isitayela sakho kanye string olude amapharele - nesifazane. Qiniseka ukuthi ukwenza isetshenziswa eziyizintandokazi zakho, ngisho noma ukubhema ngawe - umgoqo. Hlobisa ebunzini iribhoni ububanzi kanye nezinsiba noma izimbali.
Ngiphakathi akusho ukuthola isithombe oyifunayo ngaphandle Luhambo elihambisana isitayela ekhethiwe, izinwele kanye izimonyo. Ngakho-ke kuyadingeka ngaphambili ukuba nginakekele lolu daba bese ukhetha ofanele ngawe, ukwenza-up kanye kwekhanda. I ukwakheka yayidumile elandelayo inhlanganisela: lipstick red kanye obukhulu black ezambiwa emhlabeni nentaba iso. Izinwele zehlukile amagagasi ngasesinqeni se esiphongweni. Ngendlela babe zezinwele short, ikakhulukazi sikwele.
kusukela epilweni yangamalanga yesimodeni, nge ezinsukwini zayo ngezinye izikhathi grey futhi okuyisidina, sibophezela sigcine imikhawulo esiqinile emhlabeni, angeke asinike imizwa ezidingekayo kanye ngobudedengu ukuthi uyakuthanda ukuphila futhi lapho sasikhona ezweni ezigebengu futhi Mods. Ngakho egxilile wangaleyo nkathi, sithatha off imaskhi futhi uthole injabulo yangempela bangempela kusukela ithuba uzame indima entsha engajwayelekile.
Yini ukugqoka ibhulukwe ophuzi ukubheka stylish
Le midwebo engavamile kakhulu ngabaculi adumile: isithombe kanye nencazelo
Ukususwa laser hemangiomas ezinganeni nakubantu abadala: Izimo futhi banakekele emva inqubo
Kungani iphupho inja ebomvu? incwadi Dream uzokutshela!